Ginny sy Georgia - Ny anton'ny fahombiazana lehibe amin'ny andiany Netflix | Bezzia
Susana godoy | 06/04/2021 14:00 | ankehitriny
Vao herinandro vitsivitsy lasa izay, ny andiany 'Ginny sy Georgia'. Na dia angamba tamin'ny voalohany dia tsy nanomboka ho iray amin'ireo ankafiziny lehibe hahatongavana fahombiazana izany. Tao anatin'ny fotoana fohy dia napetraka teo amin'ireo be mpijery indrindra teo amin'ny lampihazo izy.
Noho izany, manana tadim-bolo marobe izy io ny andianao vaovao tianao. Efa hitanao ve? Raha izany dia ho fantatrao tsara izay lazaiko ary raha tsy izany dia mbola azonao atao ihany ny mahita sy manandrana. Fomba adala ho an'ny tetika fa misy farango maro an'io.
1 Ny fifandraisana ananan'ny reny tena tanora sy ny zanany
2 Ny tantara ao ambadiky ny reny miaraka amin'ny tsiambaratelo
3 Fahatanorana sy ny olana mahazo azy
4 Fifandraisana fitiavana ao 'Ginny sy Georgia'
Ny fifandraisana ananan'ny reny tena tanora sy ny zanany
Ny marina izany ny fifandraisan'ny renin'i Georgia sy ny zanany dia zavatra iray izay mitsambikina raha vao jerena. Toy ny reny na raim-pianakaviana rehetra dia omeny ho azy ireo ny zava-drehetra saingy marina fa mandeha lavitra kokoa izy. Satria io fifandraisana amin'ny namana tadiavintsika rehetra amin'ny reninay na zanakavavintsika io dia toa lasa velona izao. Ambonin'izany, indraindray ny fanapahan-kevitry ny zanaka vavy dia misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny olon-dehibe, raha ny mifanohitra amin'izay no izy. Ho hitantsika io fahalalahana tanteraka io eo amin'ny lafiny finamanana sy ny fifandraisan'ny mpianakavy, zavatra tianay ho hita avy amin'ny fizarana voalohany, na dia hivoatra ihany koa izany rehetra izany. Koa satria ao ambadik'ity fifandraisana ity dia misy miafina mihoatra ny maizina sy sarotra.
Ny tantara ao ambadiky ny reny miaraka amin'ny tsiambaratelo
Ny zava-drehetra dia manana mariky ny firaisana ary noho izany, ao amin'ny fifandraisana amin'ny reny sy ny zanaka vavy koa. Midika izany fa raha toa izany ny fifandraisana dia ho zavatra iray izany. Angamba satria niteraka kely ny zanany vavy ilay renim-pianakaviana, nandalo tantara an-tsehatra fianakaviana sasany izay nandehandeha taminy. Ka, Rehefa hitan'i Ginny zanakavavy izay nafenin'ny reniny dia tsy mamela azy izy na toa izany. Fa marina fa mbola betsaka ny zavatra tokony ho fantatra raha te hahazo izany. Ny tsiambaratelo dia haseho amin'ny endrika mitsambikina amin'ny fotoana. Amin'izany fomba izany dia azontsika tsara kokoa ilay adihevitra.
Fahatanorana sy ny olana mahazo azy
Ankoatry ny tsiambaratelo sy ny fifandraisana misy eo amin'ny reny sy ny zanany vavy, ny andian-dahatsary Netflix 'Ginny sy Georgia' dia ahitana tantara an-jatovo koa. Ny firaisana ara-nofo voalohany, ny fitiavana tonga sy mandeha ary koa ny lanjan 'ny finamanana sy ny aretina sasany. Toa ny fifandrafiana sy ny fahamatorana koa no mifandona tanteraka amin'ny andiany toa izao. Ka ny priori dia azo lazaina tsara momba ny andian-tsarin'ny tanora, na eo aza izany dia mandrakotra betsaka kokoa noho izay azontsika eritreretina. Misy firesahana fitoviana sasany amin'ilay andian-tantara iray izay nahomby teo aloha ary tsy iza fa ny 'Gilmore Girls'.
Fifandraisana fitiavana ao 'Ginny sy Georgia'
Satria tsy ny zava-drehetra dia ho tantara an-tsehatra ao amin'ny 'Ginny sy Georgia', manana hatsikana ihany koa izany ary koa lohahevitra fitiavana. Zavatra misongona eo amin'ny reny sy ny zanany vavy, samy manana ny hoaviny tsy azo antoka. Na dia marina aza fa indraindray isika dia afaka mangataka fa ny zanaka vavy matotra kokoa noho ny reny. Ny fitiavana am-pitiavana ary koa ny firaisana ara-nofo voalohany dia sasany amin'ireo hevi-dehibe. Lohahevitra izay lalaovina amin'ny voajanahary tanteraka ary manampy antsika hahatakatra bebe kokoa ny litera tsirairay. Ka taorian'ny nankafizanao ny vanim-potoana voalohany, ny fanontaniana apetraky ny tsirairay dia: Hanavao ny 'Ginny sy Georgia' amin'ny vanim-potoana faharoa ve i Netflix? Azoko antoka fa amin'ny fahombiazana ananany dia hahalala zavatra tsara tsy ho ela isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Ny anton'ny fahombiazan'ny andiany 'Ginny sy Georgia' ao amin'ny Netflix